Microsoft waxay ka codsaneysaa Google inay qaado Suuqa Emailka Shirkadeed | Martech Zone
Microsoft waxay ka codsaneysaa Google inay qaado Suuqa Email-ka Shirkadeed
Khamiis, Juun 25, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Sida inbadan oo idinka mid ah, waxaa laygu qasbay inaan la shaqeeyo Microsoft Outlook shirkadayda. Sidoo kale waxaa laygu qasbay inaan naqshadeeyo oo aan diro emaylka anigoo adeegsanaya HTML iyo sawirro fudud si aan u hubiyo in macaamiishayada shirkadaha ahi ay u akhrin karaan emails-kaas. Iyadoo Muuqaalka 2007, Microsoft ayaa ka tagtay heerarka webka ee HTML oo ku soo noqday heerkoodii 2000 - emayl ka turjumaya mashiinka Microsoft Word.
Muuqaalka hadda wuxuu sheegay in noocooda 2010 ay sii wadi doonaan inay adeegsadaan mashiinka wax soo saarka ee Microsoft Word. Fikradda kaliya ee aan sameyn karo ka dib toban sano oo aan wax soo kordhin ah sameynin ayaa ah in Microsoft aysan mar dambe dooneynin inay lahaato Suuqa Email-ka Shirkadaha. Microsoft ma rabto inay ka caawiso meheraddaada gudbinta farriimaha foomamka is-dhexgalka ah, Flash, ama xitaa is-dhexgalka Silverlight. Microsoft waa inay rabaan Google inay hogaamiso suuqan.
waxaan qabaa Google waxay diyaarinaysaa la wareegida Google Wave. Google Wave, haddii loo sii daayo sidii loo xayaysiiyay, wuxuu furi doonaa isgaarsiinta shirkadaha wada shaqeyn dhab ah, wadaagid, iyo xirmooyin adag oo API ah oo ku saabsan isdhexgalka caadada ah. Waan hubaa inaan si hufan u hubin doono inay bixin doonto foomam iyo Flash, sidoo kale, maadaama ay ku saleysan tahay biraawsar.
Tani waxay noqon kartaa burburka Muuqaalka… iyo Isdhaafsiga sidoo kale. Haddii Google ay kobcin karto emaylka oo ay ku dari karto astaamo hagaajinaya isgaarsiinta shirkadaha, suuqa ayaa fal celin doona. Haddii shirkaduhu ay bilaabaan inay damaanad ka qaataan Muuqaalka 'Outlook', ma jiraan baahi badan oo loo qabo Microsoft Exchange, sidoo kale.
Waxaa jira kacdoon sii kordhaya oo looga soo horjeedo Microsoft oo leh ogeysiiskan cusub… ku biir kooxaha muusikada ee Twitter! Ama ha sameyn… waxaa laga yaabaa in wax ka fiican ay sugayaan hareeraha geeska!
Labaatankii sano ee la soo dhaafay waxaan la shaqeynayay shirkadaha si aan uga faa'iideysto teknolojiyadda si loo hagaajiyo loona xoojiyo istiraatiijiyadooda isgaarsiineed ee ugu macquulsan. Waa wax aniga igu cajaa’ib badan in Microsoft, intay iska leedahay suuqa e-maylka shirkadaha, ay wax yar samaysay si ay gacan uga geysato hal-abuurnimada suuqaas.
Suuqgeynta iimaylku waxay ubaahantahay inay sida ugu dhakhsaha badan u kobciso sida ay baraha bulshada u leeyihiin… Microsoft-na waa inay noqotaa midda sare uqaadaysa. Haddii aysan sidaas sameyn, waxaan hubaa inay Google sameyn doonto.
Tags: emaylka shirkadahamacmiilka desktopemailiimayl htmlhaya'ad emailgoogle gmailaragtida microsoftOdoroskaemaylka aragtidaaragti html
Waa maxay Raadintaada Aasaasiga ah?
Sidee ayey u fududahay in Ganacsi Adiga Lagula Sameeyo Khadka Tooska ah?
Jun 25, 2009 at 12: 47 PM
Ma hubo in shirkadaha 'waaweyn' runti ay aqbali doonaan bedelida boggooda emailka, haddii ay dhacdo in Google ay dhaafto Microsoft Waxaan sidaa u leeyahay, maxaa yeelay haa, halka Microsoft ay leedahay inta badan e-mayllada shirkadaha, haddana waxaa jira dhowr shirkadood oo Fortune 500 ah oo adeegsada Lotus Notes… mar ay shirkadaha 'waaweyn' wax ka qabtaan wax ay adag tahay in dib loo furo.
Jun 25, 2009 at 5: 32 PM
Dhibic wanaagsan! Markii aan ka shaqeynayay wargeyska, waxaan isticmaalnay Lotus Notes. Sababta, in kastoo, waxay ahayd maxaa yeelay waxaan ku horumarin karnay xallinta habsami u socodka shaqada ee Domino oo si fiican isku milmay. Waxaan u maleynayaa in otomaatigga iyo awoodda isdhexgalka ay fure u tahay - haddii Google uu bixin karo barxad lacag badbaadinaysa, shirkadaha Fortune 500 waxay bilaabi doonaan inay haajiraan.